URakuten Ujoyina i-Spotify kwi-European Union ukuphanda iiNtlawulo zeVenkile ye App | IPhone iindaba
URakuten Ujoyina iSpotify kwi-European Union ukuphanda iiNtlawulo zeVenkile ye App
Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, u-Spotify wathumela ileta kawonke-wonke kwi-European Union eyimemela kuyo uphando ngezenzo zika-Apple ngeenkonzo zomntu wesithathunjengoko zibonwa kwi ukujongela phantsi kweemeko Xa kufikwa kukhuphiswano nxamnye neApple Music, kule meko, okoko inkonzo yokusasaza umculo ka-Apple akufuneki ihlawule i-30% kwimirhumo.
Kubonakala ngathi ayinguye yedwa. Nangona kuyinyani ukuba iNetflix, i-HBO okanye nayiphi na enye inkonzo yokusasaza inokuthi ijoyine isimangalo, oyena mntu uthathe inyathelo lokuqala nguRakuten, isigebenga saseJapan, esithi Ikhomishini engama-30% ishiye ukuhambisa iincwadi zakho ngokusebenzisa kwayo kuchasene nokhuphiswano.
UKobo, inkampani encedisayo kaRakuten ethengisa iincwadi kwi-intanethi, wafaka isikhalazo sakhe ngoMatshi ophelileyo kwi-European Union, esithi ukuhlawuliswa kuka-Apple ikhomishini engama-30% kwintengiso eyenziwe kwindalo yayo. ikhuthaza inkonzo yakho yeencwadi zeApple.
NjengakwiApple Music, Iincwadi ze-Apple azihlawuli naluphi na uhlobo lwemirhumo Ukuthengisa iincwadi zabo ngeqonga leApple, kuba yinto ecacileyo ekungekho elinye iqonga elinokukhuphisana nayo.
Ingxoxo ka-Apple yokuxhasa le khomishini yile inikeza izixhobo ukuze ukwazi ukuthengisa iinkonzo zakho kwivenkile yeapp yakho. Ezinye iingcali zithi yinto efanelekileyo yeshishini ukufuna ikhomishini, njengoko iApple kufuneka ixhase ukusebenza kweqonga ukuze abanye baxhamle.
Zombini iiSpotify kunye neRakuten azifuni iApple iyeke ukugcina iipesenti ezingama-30 zokuthengwa okanye ukubhaliswa (njengonyaka ipesenti yehla iye kwi-15%), kodwa endaweni yoko yehlise ipesenti koku inokucingelwa ziinkampani kwaye ke ikwazi ukubonelela kwakhona ngamathuba okufumana iinkonzo zazo kwiVenkile yeApple.
Zombini iNetflix kunye neSpotify, njengabanye, bayeke ngaphezulu konyaka odlulileyo ukuvumela ikhontrakthi yeenkonzo zabo ngokusebenzisa isicelo iyafumaneka kwiVenkile ye App, ebamema ukuba batyelele iwebhusayithi yayo (ngaphandle kokongeza ikhonkco ngqo) ukwenza njalo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iapps zokusebenza » URakuten Ujoyina iSpotify kwi-European Union ukuphanda iiNtlawulo zeVenkile ye App
Ukohluka kweentloko u-Christie Smith ushiya i-Apple
I-Apple iya kugubungela inqaku eliphambili leWWDC 2020 kwiYouTube